“AKUPHEFUMULEKI” NGENXA YENKOHLAKALO YEZIGIDI EMNYANGWENI WEZEMFUNDO - Inkatha Freedom Party
UMnyango weZeMfundo KwaZulu-Natal uvele ngomqala obhukwini lwenkohlakalo yamanani aphindaphindiwe ezinsiza zokulwisana nesifo seCovid-19 ezikoleni zakulesi sifundazwe. Izisebenzi zalomnyango ziyaqhubeka nokuzisikela amavenge kwimali yabakhokhintela phezu kokuzibophezela kwabo nokwenza sengathi bayaphikisana nenkohlakalo kanti bangene shi ngomkhono nesiphanga.
Lokhu sekuphinde kwahlaluka ophenyweni lwakamuva olwenziwe iKhokhasi yeNkatha Freedom Party eSishayamthetho saKwaZulu-Natal lapho ivumbulule umkhonyovu wenkohlakalo enuka phu phakathi koMnyango WezeMfundo oholwa nguMhlonishwa Kwazi Mshengu kanye nezinkampani ezinye zazo eziyizi”poki”. Ophenyweni olunzulu lweKhokhasi ye-IFP KwaZulu-Natal, ludalula inkohlakalo phakathi kwenkampani ebizwa ngeNjikiyesizwe Projects egixabezwe ngomsebenzi wokuletha izinsiza yokulekelela ukunqanda isifo i-Covid 19 ofinyelela ezigidini ezibalelwa ku ku-R27 562,500 million. Le nkampani ebhalise ikheli layo ngaphansi kuka -CIPC ukuthi ngeyakwa-419 Nhlekane street, Imbali Unit 2, Pmb, 3219. Uphenyo ludalula ukuthi awukaze waba khona nakwaMadala eJuteni lomgwaqo elokishini laseMbali. Kuvela nokuthi lenkampani yacishe yasulwa nyakenye (2019) emabhukwini akwa CIPC ngenxa yokungasebenzi.
Uphenyo ludalula ukuthi le nkampani ihlomula ngezigidi nje yabiza uMnyango wezeMfundo o-25litha bezigubhu zesanithayza eziwu- 6300 isamba semali e engu R27 562 500 wezigidi, okwaba uR4 375 isgubhu sisinye.
Akugcinanga lapho njengoba enye inkampani eyaziwa ngele-Promed Technologies egixabezwe ngomsebenzi wokuletha izibulali magciwane ezikoleni okuyizigubhu eziyizi- 6300 ezingama- 25litha okubhalwe ukuthi isigubhu sibiza R4 370 sisinye. Le nkampani yona idle uMnyango weZeMfundo R27 531 000 wezigidi.
Ozulazayithole beNkatha bafake esabo nabo iscelo kule nkampani, iPromed ebatshele ukuthi isigubhu siwu R950 sisodwa ekubeni lenkampani idayisele uMnyango weZeMfundo amalitha esigubhu esifanayo ngo-R 4370.
SiyiKhokhasi yeNkatha YeNkululeko YeSizwe KwaZulu-Natal siphinde senze olunye uphenyo ngenkampani ezibiza nge-Logan Medical and Surgical Pty Ltd ehlomule ngo- R122 million kwithenda yezibulali magciwane. Sifake isicelo sokuhweba nale nkampani ebize u-R32 ngebhodlela ngalinye eliwu-500ml wesanithayiza ekubeni uMnyango WeZeMfundo wona ulithenge ngo-R69.57 kwinkampani efanayo. Lokhu kuchaza ukuthi lo emnyango ukhokhe izigidi ezingu- R16 975 080 ngalamabhodlelana ezibulali magciwane ayi- 244 000. Ukuba loMnyango awuhlaselwe ilo mdlavuza wobusela obungenanembeza ubuzosebenzisa R7,8 wezigidi kuphela wonge izigidi eziyi-R9 ngentengo ejwayelekile. Ngesikhathi iNkatha ifaka esayo isicelo sokuthenga inkampani kaLogan isibize R260 isigubhu esingu-5 litha ekubeni lenkampani idayisele uMnyango weZeMfundo ngo-R726.09 isigubhu ngasinye.
Lokhu kuchaza ukuthi uMnyango weZeMfundo uchithe R88 582 90 wezigidi ngo-5 litha abangu 122 000. Ukuba lo mnyango ubungaqhubi inkohlakalo ngesikhathi uhwebelana nalezi zinkampani ubuzokhokhela lezi zinsiza ngo- R31.7 wezigidi wonge R56.3 wezigidi ukuba bekungacebiswa izisu zamanye amadoda. INkatha ayikunanazi ukuthi lomnyango imali yabakhokhintela uyidla bume wena owabona izingane zidlala ucabhayiyane.
Siyazibuza siyaziphendula ukuthi iyiphi le migodi engagcwali ekubeni izingane ezikoleni zeswele izindlu zangasese zimpintshana emakilasini ngenxa yokugcwala okweqile. Uyadela owaziyo ukuthi udaba lwenzukayikeki yamathangi okuthiwa gabize R28 000 ngalinye wawuyiqiniso kangakanani. SiyiNkatha sicela incazelo ngalezi zinsolo zale nkohlakalo ehlasimulisa umzimba.
Kungathintwa: UMhlonishwa Mntomuhle B Khawula, MPL